Ny raharaha momba ny famonoana an'i Jeffrey MacDonald
Olana Mpanao heloka bevava fanta-daza
Ny raharaha of Jeffrey MacDonald
Tamin'ny 17 Febroary 1970, dia nisy heloka bevava mahatsiravina nitranga tany ivelan'i Fort Bragg any Caroline Avaratra. Naratra mafy ny vadin'ny dokotera iray sy zanaka roa ary naripaka ilay dokotera. Ny zava-misy tamin'ity heloka bevava ity dia niharan'ny fehezan-dalàna tsirairay ary ny hevitra dia nosoloana toy ny dual roa amin'ny fiposahan'ny masoandro.
Mpianatra ambony ao amin'ny sekoly
Jeffrey MacDonald sy Colette Stevenson dia lehibe tao Patchogue, New York.
Nahafantatra izy ireo nanomboka tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary nanomboka nampiaraka tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Nitohy ny fifandraisan'izy ireo rehefa samy nandeha tany amin'ny oniversite. Tany Princeton i Jeffrey ary nanatrika ny Skidmore i Colette ary tamin'ny faran'ny 1963, roa taona monja tao amin'ny oniversite, dia nanapa-kevitra ny hanambady izy roa. Tamin'ny Aprily 1964 dia teraka i Kimberly, zanak'izy ireo voalohany, ary lasa reny manontolo andro i Colette raha nanohy ny fianarany i Jeffrey.
Dr. Jeffrey MacDonald dia manome ny tafika
Taorian'ny nahatongavan'i Princeton Jeff tao amin'ny Sekoly Ambony momba ny Mediam-bahoaka tao Northwestern tany Chicago. Na dia teo aza ireo ankizy roa ireo dia i Kristen Jean, izay teraka tamin'ny Mey 1967. Ny hetsika dia sarotra ho an'ny fianakaviana tanora saingy ny ho avy dia mamiratra. MacDonald dia nahazo mari-pahaizana momba ny fitsaboana ny taona nanaraka ary taorian 'ny nahavitany ny asa fivahinianany tany Columbia Presbyterian Medical Center any New York City dia nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny tafika izy ary ny fianakaviana dia nifindra tany Fort Bragg, NC.
Tsara ho an'ny fianakaviana MacDonald ny fiainana
Nandroso haingana ho an'i MacDonald ny fandrosoana ary vetivety dia notendrena ho miaramila manokana izy (Green Berets) ho mpandidy Group.
Colette dia be atao ho renim-pianakaviana saingy nanana drafitra ny hiverenany any amin'ny oniversite amin'ny farany ary ho tonga mpampianatra. Nambarany tamin'ireo namanao nandritra ny Krismasy 1969, fa tsy handeha ho any Viet Nam i Jeff, fa ny fiainana dia ara-dalàna sy sambatra, ary niandry zazalahy vaovao iray izy tamin'ny volana Jolay. Saingy tao anatin'ny roa volana monja, ny fanantenana rehetra sy ny fahasambaran'i Colette dia nahitana traikefa mahatsiravina.
Namaly antso an-tariby ny polisy miaramila
Tamin'ny 17 Febroary 1970, nisy antso an-telefaona nalefa avy amin'ny mpandraharaha iray ho an'ny polisy miaramila tao Fort Bragg. Avy amin'ny kapiteny Jeff MacDonald izay nangataka fanampiana sy fiara fitaterana tonga tao an-tranony. Rehefa tonga tao amin'ny tranon'ny MacDonald ny polisy miaramila dia nahita Colette 26 taona niaraka tamin'ireo zanany roa, dia i Kristen maty dimy taona ary roa taona i Kim, maty. Teo an'i Colette i Jeff MacDonald, ny tanany nanindry azy. Velona izy saingy naratra.
Ny heloka mahatsiravina
Kenneth Mica dia iray amin'ireo solombavambahoaka izay tonga voalohany tao amin'ny tranon'ny MacDonald ary nahita ny vatan'i Colette sy ny ankizy. I Colette dia hita eo amin'ny lamosiny ary misy ampahany amin'ny tratrany misy saribakolokolo mihintsan-dravina. Voakorontana ny tarehiny sy ny lohany ary nafenina ra izy. Nokapohina ny lohan'i Kimberly ary nisy ratra tamin'ny kibony teo amin'ny tendany. Ny kristiana dia nosoloana imbetsaka tao amin'ny tratrany sy ny lamosiny.
Velona i MacDonald
Mica ny mijery an'i Jeffrey MacDonald izay toa tsy mahatsiaro tena. Nanomboka ny fialan-tsasatra am-bavany tao MacDonald izy ary rehefa nifoha izy dia nitaraina fa tsy afaka niaina izy ary nilaza fa nila fantsona boribory izy. Nanandrana nanosika an'i Mica avy eo i MacDonald, ary nikiakiaka taminy mba handeha hanatona ny zanany sy ny vadiny.
Nanontany an'i MacDonald izay zavatra nitranga i Mica ary nilaza taminy i MacDonald fa nanafika azy ny lehilahy telo sy ny karazana hippy karazana miaraka aminy.
Ilay Vehivavy ao amin'ny Hateny
Kenneth Mica dia nahatsiaro ny hahita vehivavy iray mifanaraka amin'ny filazalazan'i MacDonald izay nanome tany ivelan'ny orana teny amin'ny arabe akaikin'ny tranon'ny MacDonald fony izy nandeha ho any an-dalana hamaly ny antso an-tànana. Rehefa nampahafantatra ny lehibeny i Mica momba ny nahitany ilay vehivavy izay tsapany fa tsy noraharahiana. Fa ny lehibeny kosa dia nifantoka tamin'ny zavatra nolazain'i MacDonald.
MacDonald dia hopitaly mandritra ny fito andro
Tao amin'ny hopitaly, dia notsaboina noho ny ratra teo amin'ny lohany i MacDonald, fahasimbana maro sy mangana teo an-tsorony, tratra, tanana sy rantsan-tànana, ary maratra maromaro manasaraka ny fony sy ny faritra hafa amin'ny vatany. Ny ratra amin'ny antsy dia nanasongadina ny havokavony ka nahatonga azy hianjera.
MacDonald dia nijanona tao amin'ny toeram-pitsaboana hatramin'ny 25 febroary, afa-tsy rehefa niala tao Colette sy ny fandevenana ny zazavavy.
MacDonald dia voampanga amin'ny famonoana
Tamin'ny 6 aprily 1970, MacDonald dia nanao famotorana maro avy amin'ireo naman'ny tafika. Nanapa-kevitra izy ireo fa ny ratra nahazo an'i MacDonald dia nipoitra tampoka sy ny tenany ary ny tantara momba ny mpitsongo dia fanamboamboarana noforonina mba hanararaotana fa i MacDonald no tompon'antoka tamin'ny famonoana an'i Colette sy ny ankizy.
Ny 1 May 1970, ny tafika dia niampanga ampahibemaso an'i MacDonald tamin'ny famonoana ny fianakaviany. Dimy volana taty aoriana, ny Colonel Warren Rock, ny tompon'andraikitra misahana ny fitsarana, dia nanoro hevitra fa havoaka ny fiampangana.
Navoaka ny MacDonald
Nafahana i MacDonald ary nahazo tsikera mendri-kaja tamin'ny volana Desambra ary tamin'ny Jolay 1971 tany Long Beach, California miasa ao amin'ny Foibe Medical Center Mary. Ireo ray aman-drenin'i Colette, Mildred sy Freddie Kassab, dia nanohana tanteraka an'i MacDonald ary nino fa tsy nanan-tsiny izy hatramin'ny fotoana nifindrany tany Kalifornia. Ny antony nanosehana ny Kassabs hanova ny sainy dia antso an-tariby izay nolazain'i Kassab fa nahazo an'i Jeffrey tamin'ny Novambra 1970, izay nanamarihan'i Jeff fa nihaza sy namono iray tamin'ireo mpanafika.
Ny Kassabs dia mamadika an'i MacDonald
Mino an'i MacDonald ho mpamono olona, ​​ny Kassabs dia niara-niasa tamin'ny CID ary niasa tamim-pientanentanana mba hitondra an'i MacDonald ho amin'ny rariny. Saingy niadana loatra ny fitsarana noho ireo mpivady zokiolona ary tamin'ny Aprily 1974, dia nitaky fitarainan'ny olom-pirenena iray tamin'i MacDonald izy ireo. Tamin'ny volana Aogositra dia nisy jury lehibe niangona hihaino ny raharaha tao Raleigh, NC ary i MacDonald dia nandà ny zony ary niseho ho vavolombelona voalohany. Manaraka> Ny fanapahan-kevitry ny Grand Jury>
More: MacDonald's Version
Ny Tranonkalan'ny MacDonald Case
Fatal Justice avy amin'i Fred Bost, Jerry Allen Potter
Fatal Vision nataon'i Joe McGinniss
Ny Heloka Bevava ao Florida Ny Emile Carr
Sary Gallery of Gang Tattoos
Ny fanonganana ny 'Precious Doe'
Ny famonoana an'i Shanda Sharer
Ny Murders avy any Terrance Rankins sy Eric Glover
Profile of Captain Death Row Brenda Andrew
Teny farany nolazain'ny mpanao heloka bevava malaza
Ny Nazi Low Riders - NLR
Amy Archer-Gilligan sy ny famonoana azy
Ny endri-tsoratra japoney 4 Japoney
Sample Chart of Accounting for Business Arts or Crafts Business
Ohatra ny taratasy fanolorana
Ahoana no Hahitana Azy Raha Sembana ny Sekolinao?
ACT Scores amin'ny fidirana amin'ny SUNY
Alohan'ny hanapahanao ho lasa mpampianatra ESL
Mifidiana 112 fa tsy 911 mba hifaneraseran'ny polisy amin'ny toerana ilana azy?
Ny Fanjakana Holandey: Tanàna Tranainy ao amin'ny kontinanta dimy
Ny dikany, ny orana, ary ny fampiasana ny 'Gringo'
Ataovy ny fitaovan'ny fitaovam-jironao ho anao - fianarana iray
'The Adventure of Tom Sawyer' Teny nalaina
Eritrereto ny Arkanjely Raphael, ilay Anjelin'ny Fanasitranana
Sarin'ny Aviator Glenn Curtiss, ny Bug Jen sy ny seaplanes manan-tantara
"Zanaky ny Andriamanitra tsara kokoa"
Ahoana ny famakiana mari-pamantarana manan-danja ao amin'ny mozika
Extremophiles - Organism Extreme
Boky fandalinana siantifika
Pinyin Romanization mba hianatra Mandarin